Polaroid dia miloka amin'ny zava-drehetra amin'ny taratasin'ireo finday avo lenta ao amin'ny MWC 2015 | Androidsis
Cristina Torres sary placeholder | | MWC
Azo antoka fa raha tapaka kely ianao amin'ireo marika rehetra tonga amin'ny tsenan'ny Android tsy misy tabataba be loatra, rehefa mahita ny Anaran'ny Polaroid raikitra amin'ny tontolon'ny smartphone misy zavatra tsy mifanaraka aminao. Na izany aza, tsy vao sambany niditra tao amin'ity tsena ity ny orinasa miaraka amin'ireo gadget natao hiara-miasa amin'ny rafitra fiasa Google. Saingy amin'ity tranga ity dia toa tsy te hitazona filokana kely izy fa vao maika manao fihoaram-pefy bebe kokoa ary manipy ny tenany amin'ny tanany tokana. Amin'ity tranga ity dia te hilaza aminao izahay fa te hisarika ny sainay amin'ny hetsika MWC 2015 any Barcelona i Polaroid.
Raha ny marina, Polaroid dia vonona ny hanao ny toeranao ho iray amin'ireo izay mendrika ho an'ny karazany izay hipetrahan'izy ireo ao an-drenivohitry ny Ramblas. Be loatra izany, fa ity no hetsika voafidy hanolotra tsy latsaky ny finday efatra hafa mampiavaka azy ary holazainay aminao eto ambany izay rehetra tokony ho fantatrao satria nanambara tamin'ny fomba ofisialy ireo toetra mampifandray rehetra izy ireo. Ho fanampin'izany, izy rehetra dia hanana endrika mahaliana tena tsara vonona hifaninana amin'ireo marika sy maodely marobe niseho tamin'ny sehatry ny mid-range sy mid-mid-range.
2 phantom polaroid
4 Vovoka Polaroid
Io no terminal izay miaraka Refy efijery 5-inch ary afaka mahafeno fepetra eo afovoan'ny finday avo lenta. Anisan'izany ny fepetra arahana ara-teknika processeur octa-core 1.4 GHz, izay na dia tsy mbola naseho aza hoe iza no manao sonia azy, dia azo inoana fa Mediatek io. Etsy ankilany, ny telefaona dia manana memoara fitehirizana anatiny 8 GB, RAM 1 GB, ary fakantsary lehibe sy faharoa an'ny 13 sy 8 megapixel.
Amin'ity tranga ity dia mizara ny ankamaroan'ny toetra amin'ny polaroid omega ary tonga amin'ny endrika mitovy aminy. Mazava ho azy, ny filohan'i Polaroid amin'ity tranga ity dia ny manatona ny tontolon'ny phablet ary ny refin'ny efijery amin'ity terminal ity dia 5,5 santimetatra. Mikasika ireo fiasa hafa, avy amin'ilay noresahinay tamin'ny andalana teo aloha, dia hiresaka momba azy izahay: mpamokatra octa-core 1.4 GHz. Etsy ankilany, ny telefaona dia hanana memoara fitehirizana anatiny 8 GB, fahatsiarovana RAM 1 GB, ary fakan-tsary lehibe sy faharoa an'ny 13 sy 8 megapixel tsirairay avy.
Izy io angamba no mamoaka ny fahatsapana betsaka indrindra, nefa koa ilay tsy fantatsika indrindra momba izany. Amin'ity tranga ity dia io no terminal kasaina handrakofana ny ampahany avo lenta amin'ny smartphone, ary azontsika atao ny manasokajy azy ao anatin'ny semgento avo lenta. Na izany aza, Polaroid Nanapa-kevitra ny tsy hanivana ny mampiavaka azy aho, azoko an-tsaina fa miaraka amina fikasana fa izy ireo no protagonista rehefa asehon'izy ireo izany amintsika ao amin'ny MWC. Ho hitantsika raha mahataitra antsika izy ireo sa raha toa ka nahatonga antsika hanana fanantenana tsy misy dikany fotsiny. Tsy misy sisa hamela fisalasalana.
Amin'ity tranga ity dia ny fanoloran-tenan'ny Polaroid amin'ny sehatra fidirana. Na dia tsy voalaza aza ny vidiny amin'ireo finday avo lenta hasehon'ny orinasa antsika amin'ny MWC dia marina fa ny sandany ambany dia antenaina hisarika ny saina amin'ity raharaha ity. Mikasika ireo masontsivana, miresaka momba ny efijery 5-inch isika, processeur quad-core, 512 MB RAM ary 4 GB ho an'ny fitehirizana anatiny fa marina dia mety ho kely aza na dia amin'ny tranga ambany aza.
Mihevitra ve ianao fa ho tonga izany Gaga izahay Polaroid miaraka amin'ity filokana quadruple amin'ny tontolon'ny smartphone ao amin'ny MWC 2015 ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MWC » Polaroid dia miloka amin'ny zava-drehetra amin'ny taratasin'ireo finday avo lenta ao amin'ny MWC 2015
Tranga vaovao mampiseho ny sisiny roa miolaka amin'ny Samsung Galaxy S Edge